Semalt Expert dia mampitandrina amin'ny Spam mitaky ny Alemà amin'ny mailaka manokana
Alemana dia nodarohan'ny korontana iray izay misy hafatra mieli-patrana miely manerana ny vahoaka manana hafatra manokana. Ny mpanolotra dia mandefa mailaka baiko izay mifanaraka amin'ny antsipiriany manokana. Ireo mailaka ireo dia ahitana ny anarana feno, nomeraon-telefaona ary ny adiresy mailaka.
Andrew Dyhan, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt , dia manome toky fa ny lohahevitr'ireo mailaka ireo dia tsy nahomby ny fandoavam-bola nataon'ny mpandray ny volavolan-dalàna iray ary ny hafatra dia mitohy manohintohina handefa izany raharaha izany amin'ny fampiharana lalàna na fanangonam-bola fanangonam-bola raha toa ka tsy vita ao anatin'ny fe-potoana voatondro. Ny anaran'ny orinasa nampiasaina tao anatin'ireo hafatra dia niova kely teo amin'ireo mpampiasa, saingy ny antsipiriany momba ny mombamomba manokana dia mitovy amin'ny toe-javatra rehetra na amin'ny hafatra sy amin'ny rakitra ratsy - free spin no deposit bonus 2019.
Ity karazana vaovao ity dia mijery marina ary manosika ny kinendry hiantsoana ny mailaka fampandrenesana. Ireo mpikaroka Symantec dia nanamarika fa ny fanafihana tahaka izany dia natao tamin'ny tanjona tany Royaume-Uni ary niely patrana tamin'ny Aprily, 2016. Raha tsindry amin'ny hafatra amin'ny spam, ny malware dia afaka mampiseho ny fampahalalam-baovaon'ny banky dia manimba ny solosaina findainy. Ireo hafatra momba ny spam dia mandinika ihany koa ny tanjon'ny kaonty manokana sy ny antsipiriany amin'ny banky.
Ny ankamaroan'ireo hafatra farany momba ny spam voaray dia voalaza fa nosoratana tamin'ny teny alemà. Ny mpikaroka sasany (Symantec) dia nampitaha ny fitoviana misy eo amin'ireo hafatra ireo sy ireo izay nalefa tany amin'ny tanjona hafa tany Royaume-Uni ary nahitana lalao iray. Ireo hafatra momba ny spam tamin'ny fotoana roa ireo dia nanana ny mombamomba azy manokana momba ny tanjona napetraka ao afovoan'ilay hafatra..Ny hany fahasamihafana dia ny hafatra nalefan'ny spam nalefa any amin'ny tanjona any Royaume-Uni dia nahazo ny mpividy mba hanindry ny rohy mitondra any amin'ny tranonkala malaza, saingy ny mailaka alemana dia nahitana karazana fandefasana karazana. Tsy mahagaga izany satria ny hafatra amin'ny alàlan'ny spam alemana dia nahitana ny atin'ny tahirin-tsipika zipikana natao ho an'ny hafa.
Ny mailaka alemà spam izay misy ny laharana dia mampiasa sifix '.com'. Ity rakitra ity dia nesorina tamin'ny ankamaroan'ny fampahalalam-baovao izay mamoaka ny fiandohany. Ny tsy fahampian'ny famantarana famantarana ao amin'ny rakitra dia tsy mampidi-doza, fa malware maoderina. Ny Trojan.Nymaim.B (lasibatra notadiavin'ny Symantec mpikaroka) dia nampiasa teknika fanodinana sandboxy mba hisorohana azy tsy hikirakirana amin'ny milina virtoaly. Ny malware dia natao haka an-keriny, an-tsokosoko, ny fahazoan-dàlana amin'ny banky sy ny fampahalalana manokana hafa raha toa ka miditra ny lasibatra.
Ireo fampahalalam-baovao manokana avy amin'ny sehatra sy tranokala misahana ny tranonkala dia ampiasain'ireo spam mba hanamboatra ny fahaiza-manaony sy handefa mailaka amin'ny mailaka ho an'ny tanjona tsy ampoizina. Ny fampiasana bebe kokoa ny aterineto sy ny fandrosoana ara-teknolojia samihafa dia mety hampidi-doza ny manemena ny mpandray azy, ary ity karazana fanafihana ity dia andrasana hitombo amin'ny ho avy. Ireo mpampiasa mailaka dia nanoro hevitra an'i Symantec mba hiantso ny mpandefa mailaka hanamarina ny hafatra momba ny spam alohan'ny hanaovana fihetsiketsehana raha toa ka azo itokisana ny loharano na tsia. Ny fanesorana ireo mailaka fijerena mampiahiahy dia manan-danja indrindra, raha toa izy ireo ka ahitana rakitra sy rohy. Ny fitazonana ny rindrambaiko momba ny fiarovana amin'ny alàlan'ny famoahana amin'ny fotoana rehetra dia hampiato ny mety hisian'ny loza ary hiaro ny mpampiasa hanova ireo karazan-javatra malware vaovao. Ny fanakanana ny mailaka, amin'ny fampiasana serivisy fanivànana mailaka, mifandray amin'ny karazana fanafihana, dia afaka mitazona mailaka azo antoka.